King Mswati III 14 xaas, nolol raaxo leh laakiin boqorka dal faqri ah oo AIDS-ku…. – SBC
King Mswati III 14 xaas, nolol raaxo leh laakiin boqorka dal faqri ah oo AIDS-ku….
Boqor King Mswati III waa boqorka wadan yar oo lagu magacaabo Swaziland oo ku yaal afrikada Koonfureed waxaynu warbixintan ku eegeynaa nolasha la yaabka leh ee uu ku nool yahay King Mswati III taasi oo ah mid raaxo leh xili dalkiisu uu ku jiro marxaladahan.
Faqiirnimo tan ugu xun aduunka
afartii qof ayaa qaba cudurka AIDS-ka
Boqorku wuxuu qabaa 14 xaas
Gabadhii yar ee ishiisu qabato habeen kama maqnaato hoygiisa
Celceliska nolasha qofka ayaa ka soo dhacdey 60 sano jir una sidbatey 33 sano
41% haweenka uurka leh HIV ayey sidaan
kala bar shaqaalaha warshadaha AIDS ayay qabaan.
26% dadka waa weyn oo AIDS qaba.
King Mswati oo ku labisan hidaha & dhaqanka boqortooyada
Dalka Swaziland wuxuu ku yaal qaarada Afrika dhanka Koonfureed wuxuu xuduud kala leeyahay dhanka Waqooyiga, Galbeedka & Koonfurta wadanka South Africa, xaga Bari waxaa ka saaran dalka Mozambique.
Dalku waa dal aad u yar wuxuu ku fadhiyaa masaafo dhul oo gaaraysa 17,364 km oo laba jibaaran wuxuu la baaxad la’eg yahay gobolka Wales ee ka mid ah boqortooyada UK ama gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka.
Mswati & xaaskiisa oo la taagan boqorada UK & saygeeda
Dalka Swaziland wuxuu ka qaatey xornimadiisa guumeystihii British-ka September 1968-dii, luuqadaha lagaga hadlo waa English & Swati.
Mid ka mid ah xaasaska Boqorka
waa dalka aduunka ugu badan ee dadkiisu qabaan cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka waxaana cudurkaasi qaba 26% dadka waa weyn, taasi oo ka dhigan in afartii qof uu mid ka mid ah qabo cudurkaasi ama virus-ka sababa ee HIV.
Wadanka xaaladiisu sidaasi tahay waxaa boqor u ah King Mswati III oo ku nool mid ka mid ah heerka nololeed ee aduunka ugu qaalisan uguna raaxada badan.
Waa kuma King Mswati III ?
Makhosetive Dlamini oo loo yaqaan King Mswati III wuxuu dhashay 19-kii bishii 1968, wuxuu ka dhaxley boqortooyada wadanka Swaziland Aabihiis Ngwenyama Sobhuza II wuxuu ka mid ahaa 210 caruur ah oo Aabihiis Sobhuza II uu dhaley kuwaasi oo ay u dhaleen 70 xaas uu guursadey.
Aabihiis markii uu dhintey sanadkii 1982-dii uu ka tagey 1000 caruur ah oo ay sii dhaleen ilmaha uu dhaley iyo kuwii ay sii dhaleen.
King Mswati & mid ka mid ah 14-kiisa xaas oo xaflad ku sugan
King Mswati III waxaa loo caleemo saarey boqortinimada dalka Swaziland sanadkii 1986-dii isagoo 18 jir ah lix maalmood oo qurna ay u dheer tahay, xiligana wuxuu boqor u yahay boqortooyada Afrika ugu cimriga dheer.
Waxbarashadiisa wuxuu ku qaatey wadanka England isagoo dhigan jirey Sherborne School oo ah Iskool gaar ah oo wiilashu wax ku bartaan.
Nolasha heerka sare ah ee uu ku nool yahay, dhaqankiisa & qaabka xukunkiisa ayaa noqdey mid soo jiitey saxaafada taasi oo ku soo duwday indhaha bulshada caalamka.
Xulasha xaaska & boqorka Mswati
ciyaaraha Swazi Reed Dance ee hablaha aan hoodi la oran ka qayb galaan
King Mswati III wuxuu qabaa xiligan 14 xaas oo dhamaantood intii aanu guursan uu isha ku xadey iyagoo ka qayb qaadanaya dabaaldega caanka ee dhaqanka ee lagu magacaabo Swazi Reed Dance Children oo ah dabaaldeg ay ka qayb galaan 100 kun oo hablo da’yar oo iyagoo dhexda maro yar ugu xiran tahay, horaadaha oo banaan iyagoo ruxaya ay ku hor ciyaaraan boqorka, waxa kaliya ee hablahaasi u asturan oo maro yar lagu xirayna waa macdanta haweenka, balse inta kale banaanka ayay taal.
King Mswati III wuxuu isha ka buuxsada gabadha uu is oran karo waad guursan kartaa, hablaha qaarkood waxay ka joogtaa mar kaliya maad qabato isha boqorka, laakiin qaar kale ayay ka joogtaa yaa kaa wada halkan oo mar kaliya gurigiina kugu celiya.
Hablaha ka soo qayb gala xaflad dhaqameedkaasi qaar ayaanba 20 sano gaari, kuwana waaba ardey oo dugsi dhexe & mid sare ayay qalinka & buugta hayaan, laakiin hadii ay ku dhacdo isha King Mswati waxbarasho way isdaayaan.
Dhacdadii Zena Mahlangu
Sanadkii 2002-dii iyadoo lagu jiro xaflada dhaqameedka Reed Dance boqor Mswati waxaa ishiisu qabatey gabar yar oo lagu magacaabi jirey Zena Mahlangu oo xiligaasi 18 sano jirtey, jirkeeda banaan, dhoolo cadeyn ay ku dartey, dareenka boqorka oo ay soo jiitey ayaa keenay in laba maalin ka dib dabaaldegaasi la waayo halkii ay jaan iyo cirib dhigtey Zena, hooyadeed Lindiwe Dlamini, oo reer sabool iska aheyd waxay sheegtey in gabadheeda oo xiligaasi aheyd ardey dugsi sare ay dafeen laba nin oo xoog waa weyn kuwaasi oo la tagey, war iyo wacaalna aan laga heyn nolol iyo geeri.
caasimada Swaziland baabuur wado xumo god afka gashay
Dhacdadaasi waxaa lagu wargaliyey Booliiska, balse maalmo ka dib Lindiwe waxaa lagu soo wargaliyey war loo haystey inay u mashxaradi doonto oo ahaa in gabadheeda Zena ay ku sugan tahay deegaanka Ludzidzini Royal Village oo ah mid ka mid ah deegaanada raaxada leh ee uu degan yahay boqor Mswati.
King Mswati oo ku raaxeysana baabuur qaali ah
Laakiin sheekadu waxay noqotey “la mood noqonse waydey”, hooyo Lindiwe Dlamini, maxkamad ayay istaagtey waxaana ay qabsatey qareen waxayna sheegtey in gabadheeda uu afduub u geystey boqorka dalka, hadalkaasi oo la yaab iyo af gacan saar dhaliyey, loona qaatey in haweenaydu ay doonayso in habeen madow la waayo nolol iyo geeri.
Lindiwe waxay ku doodey in gabadheedu aanay dookheeda halkaasi ku tagin oo jajuub iyo qasab lagu haysto, laaakiin maalmo iyadoo ka dhiman tahay xiligii maxkamada waxaa haweeenaydaasi loo soo sheegay in gabadheeda oo xiligaasi 18 jir aheyd ay go’aansatey in nolasha la wadaagto boqorka, isla markaana ay kula noolaanayso deegaanka boqortooyada.
Wax loo sheegayba iyo wax la tusayba Zena 2 sano oo ay ku jirtey aamusnaan iyo qaylo la’aan sanadkii 2004-tii xaflad dhaqameed la qabtey ayaa lagu shaaciyey in Zena ay si buuxda u noqotey xaaska 10-aad ee King Mswati halkaasina waxaa ku xiran tahay qisadaasi.
Fadeexadii Ndumiso Mamba
Mid ka mid ah fadeexadaha boqor Mswati boqortooyadiisa soo wajahda ayaa dhacdey sanadkii hore ka dib markii xaaskiisa 12-aad Mswati Nothando Dube oo 22 jir ah lagu arkay iyadoo la jiifta sariir wasiirka cadaalada ee boqor Mswati ninka lagu magacaano Ndumiso Mamba.
Ndumiso Mamba oo ay saaxiibo dhalinyaro ahaayeen boqor Mswati wuxuu sanadkii 2008-dii noqdey wasiirka cadaalada, waxaase uu iscasilay sanadkii 2010-kii markii fadeexadu soo shaac baxdey, waxaana laga soo bilaabo ilaa iyo sanadkii aynu soo dhaafnay uu ku jiraa xabsi guri iyadoo hadii lagu helo cadeymaha eedeymaha lagu soo oogay uu mudan karo in la dilo.
Sidoo kale xaaskii boqorka Nothando Dube ayaa iyadana la galiyey xabsi guri isla markaana dusha lagala socdaa dhaqdhaqeeda.
Nothando Dube iyadoo 16 sano jir ah ayaa sanadkii 2004-tii iyadoo ka qayb galeysay xaflad dhalasho oo loo sameynayey wiil uu dhaley boqor Mswati waxaa qabatey Isha hablo baacsiga ah ee King Mswati waxaana gabadhaasi xiligaasi ay ku jirtey fasalka 9-aad ee Mater Dolorosa High School.
Boqortooyada King Mswati waxaa lagu sheegaa inay ka mid tahay 15-ka boqortooyo ee dunida ugu taajirsan sida uu qorey wargeyska Forbes ee arimaha dhaqaalaha aduunka ka faalooda, nolashaasi uu ku nool yahay waxay caro ku abuurtey dad badan oo dalkiisa ku nool kuwaasi oo daris la ah cuduro & faqiirnimo.
Bheki Makhubu oo ah tifaftiraha wargeyska The Nation oo ah wargeyska ugu horeeya wargeysyada ka soo baxa dalka Swaziland ayaa ka hadley la yaabka ay ku qabaan boqor Mswati.
Nothando Dube xaga dambe xaaska lagu qabtey wasiir la jiifka
“Waa arin yara aad u foolxun, waxaa jira farqi weyn ama kala durugsanaan baaxad weyn oo u dhaxeysa boqorka & dadkiisa, isagu (King Mswati) wuxuu joogaa aduun kale” ayuu yiri Bheki Makhubu .
Ndumiso Mamba daqiiqadii lagu qabtey xaaska boqorka sariir hoosteed
King Mswati wuxuu leeyahay ku dhawaad 20 gawaarida raaxada uu ka mid yahay Audi luxury oo qiimihiisu tahay 500 kun oo doolar, sanad ka hor wuxuu ugu hanjabay saxafiyiinta dalkiisa in qofkii sawir ka qaada gawaaridiisa uu xabsiga dhigi doono.
Hablo saf ugu jira in uu boqorku xusho
Laakiin dhaqaalahaasi uu ku baashaalayo King Mswati waxaa barbar socota dhibaatada dhaqaalaha iyadoo dhawaan xulka qaranka kubada cagta dalkiisa ay isaha baxeen isreebreebka koobka aduunka sababo dhaqaalaha safarada & qarashka ciyaartoyda oo aanay ka bixin.
Dhacdo kale oo ka mid ah musuqmaasuqa ba’an ee dalka Swaziland ururada haweenka ayaa ka qayliyey dhaqaale gubis ba’an oo ay ku dhaqaaqeen 8 ka mid ah xaasaska boqorka oo diyaarad qaas ah u qaatey dukaamaysi ay u aadeen dalalka Yurub & Bariga dhexe.
aadan yare says:
waa yaab iyo amakaaga
Waa Qaiso Cajiiiib Ah